Guuleed oo ka hadlay raali-gelintii Madaxweyne Farmaajo siiyey. – Kismaayo24 News Agency
Guuleed oo ka hadlay raali-gelintii Madaxweyne Farmaajo siiyey.
by admin 14th February 2020 0129
Madaxweynihii hore ee Galmudug C/kariin Xuseen Guuleed ayaa soo dhoweeyey raali gelintii uu Madaxweynaha Somalia Maxamed C/llaahi Farmaajo ka bixiyey dhibaatadii 30-ka sano ka hor loo geystay shacabka gobolada Woqooyi.
Hase ahaatee Guuleed ayaa sheegay in raali gelinta ka sokow looga fadhiyey dowlada Madaxweyne Farmaajo iney sii ambaqaado wadahadalkii xal gaarista qadiyada Somaliland, arrintaasoo uu sheegay iney ka gaabisay dowladda hadda jirta.
“Raaligalinta iyo garowshaha Madaxweyne Farmaajo ee ku aadan gadoodfalkii iyo tacadiyadii walaalaha reer Somaliland ka soo gaaray nidaamkii milateriga ahaa iyadoo ah mid soo dhaweyn mudan, haddana waxaa Madaxweynaha iyo maamulkiisa looga fadhiyey ambaqaadista wadahadalo miro dhal ah oo dhexmara labada dhinac iyo xal ka gaarista qadiyadda Somaliland ee 30 jirsatay” ayuu yiri Guuleed.
Cabdikariin Guuleed ayaa sidoo kale soo dhoweeyey hadalkii ka soo yeeray heyadda IMF iyo Bankiga Aduunka ee ahaa in Soomaaliya ay buuxisay shuruudihii deyn cafinta.
“Waxaan bogaadinayaa soona dhaweynayaa ku dhawaaqista IMF iyo Bankiga Aduunku ay ku dhawaaqeen in Soomaaliya buuxisay shuruudihii deyn cafinta.
Guuleed ayaa ka digay in fursadan dalka lagu geliyo deymo kale oo aan baahi loo qabin, wuxuuna ku baaqay in looga faa’iideysto si wanaagsan.
“Anagoo bogaadineyna tilaabadaas horay loo qaaday, haddana waxaan soo jeedineynaa in laga taxadaro qaadasho deymo kale oo laaga baaqasan karo oo dalka dib u cusleeya” ayuu yiri Madaxweynihii hore ee Galmudug C/kariin Xuseen Guuleed.
Soomaaliya oo Soo Dhoweeysy Warbixinta ay Soo Saareen IMF iyo Bankiga Adduunka
Xukuumada Soomaaliya oo mar kale ka codsatay Kenya in ay usoo gacan galiso.
Ciidamada Nabad sugida oo Fashiliyay Qatar weyn oo kusoo socotay Shacabka+SAWIRRO
admin 15th November 2017
TOP NEWS: Dhageyso Madaxweyne Xasan Shiikh Muxuu ka yiri Howlgalkii lagu dilay Horjooge ka tirsan Alshabaab?
admin 2nd April 2016
Oohin Iyo Murug Aan Xad Lahayn !! Akhriso Qisadaan Xanuunka Badan Xiliga Afurka Geeska Afrika..
admin 21st June 2015 27th August 2015